FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'I BOGLEN TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'i Boglen Terrier
Alika mifangaro Beagle / Boston Terrier
Tasha the Boglen Terrier ( Beagle / Boston Terrier amboary alika karazany) amin'ny 1 1/2 taona— 'Biby mahafinaritra. Nahazo azy ho alika amin'ny 10 herinandro. Tena mora lamasinina trano ary amin'ny ankapobeny a mianatra haingana . Fanalam-baraka ny angovo ... Dia an-tongotra 3 kilaometatra isan'andro eo ho eo, miampy adiny iray aorian'izany. Skiddish manodidina vahiny , indrindra ny lehilahy, fa tia ankizy . Miaro sy feno fitiavana. Tena alika tsara indrindra nananako. Hisy iray hafa ao am-poko! '
Ny alika Boglen Terrier dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Boston Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Pudgy ilay alika hybrid Boston Terrier / Beagle (Boglen Terrier) 6 taona - hoy ny tompony, 'Manana ny toetra mahafinaritra indrindra izy ary tena alika tsara indrindra nananako. Fantany ny fotoana tokony hilalaovana sy ny fotoana tokony itoniana. Mangina tokoa izy, maneno fotsiny ny fiantsoan'ny Beagle azy rehefa matahotra izy. Tena manana ny toe-tsaina Beagle izy. Nanenjika serfa mihitsy aza i Pudgy ary saika tratrany. Mahafinaritra izy miaraka amin'ny zanako ary mandefitra saika amin'ny zavatra rehetra. Izaho dia tompony hatramin'ny faha-2 taonany, ny tompony teo aloha dia mpianakavin'ny vadiko. Izany no antony ahafantarantsika tsara hoe inona no afangaro aminy. Tsy manana olana ara-pahasalamana izy na amin'ny karazany inona. Ny hany toetra tsy ananany dia ny faniriana hanaraka ny orony. Mahatonga azy hanana olana izany indraindray ary navoakan'ny skunk aza. '
'Daisy alika, nolaniana avy amin'ny toeram-pialofana biby izay nitoerany nandritra ny 2 volana. 2 taona izy tamin'ity sary ity. Raha ny zavatra hitako dia izy no alika mamy indrindra hitan'olombelona. Tsy dia manana toetra ambony izy, mankafy mandeha lavitra isa-maraina . Tamin'ny voalohany dia sahirana izy rehefa nitazona ny fofona Beagle ny tenany ary nanaraka ny hanitra rehetra, na dia nandositra an-tongotra aza. Soa ihany fa nisambotra an'i Daisy foana ny rahavaviko. Nandritra ny fotoana kelikely dia nanana koa izy fanahiana fisarahana, mandrava ny trano rehefa irery ao an-trano. Fa izao, ny rahavaviko dia nilaza fa izy no alika mamy sy tsara indrindra hatramin'izay. Tsy manao zavatra ratsy intsony izy. Tian'i Daisy ny mikopaka ary tia matory ao am-pofoanao ary mitroka. Nofonosiny lamba firakotra mihitsy aza izy ary hatory miaraka aminao mandritra ny ora maro izy rehefa reraka. Ny olona mankahala alika dia tia azy !! '
'Cora the Boglen Terrier (alika hybrid Beagle / Boston Terrier) amin'ny taona 1 dia efa lehibe ary tsy afaka milanja mihoatra ny roapolo kilao eo ho eo. Kely izy ... HYPER BE, tsy misy angovo mihintsy. Marina amin'ny toetrany Beagle, tsy maintsy mamofoka ny zava-drehetra izy ary manana mpamily haza mahery. Izy dia afaka ary misambotra sy mamono bitro dia, ka tokony hitandrina kokoa isika rehefa mitondra azy eny am-pandehanana. Somary sarotra ampiofanina, tsy noho ny tsy fahampian'ny faharanitan-tsaina, fa noho ny faharetan'ny fifantohana. Mahafinaritra sy mahafatifaty tanteraka izy. TIA milalao tag miaraka amin'ny Boston Terrier Peppy feno antsika izy. Tsara amin'ny alika mitovy habe aminy sy lehibe kokoa, ary tsara miaraka amin'ny saka izay mitovy habe aminy ihany koa. Tsy mivily matetika. Indraindray dia midradradradra amin'ireo bibikely maimbo izay mivezivezy ao an-tokontany, fa izany no izy. Tia misolelaka fa rehefa navela nihazakazaka kelikely. HAINGANA BE. Mahaliana ny ahitra. Tsara miaraka amin'ny ankizy. Adala izy, fa tianay izy. Ny tompona pototra dia tokony hahafantatra ny haavon'ny angovo ... sy ny fivezivezena haza. '
Cora the Boglen Terrier (alika mifangaro Beagle / Boston Terrier) atody 1 taona
firy ny spaniel akoho
'Ity no alikako kely mifangaro amin'ny Boston Terrier / Beagle antsoina hoe Cash amin'ny 9 herinandro. Alika kely be fitiavana sy be hery izy. Hitanay koa fa tena marani-tsaina izy ary mifantoka amin'ny zava-mitranga manodidina azy. Sambany izahay manana hybrid, saingy toa mifangaro ny fampifangaroana. Tiany ny milalao alika hafa amin'ny habe rehetra, tsy dia matahotra loatra ary sosialy be. Hitanay tokoa ny lafiny Beagle aminy. Ny orony dia mianjera amin'ny tany ary afaka mamofoka izay sakafo akaiky azy izy. Mihevitra izahay fa ho alika mahafinaritra izy, saingy mila fampiofanana sy fifehezana be noho ny fitiavana rehetra. '
Fergus ilay Boston / Beagle mifangaro toy ny alika kely— 'Fergus no alika tsara indrindra nananako. Tiany ny misolelaka ary manaraka ahy manodidina, tsy dia mivily, (tsy alika mpiambina tsara lol). Milalao tsara amin'ny alika hafa izy ary na dia ny saka aza. TIA ny akanjo ba nataony tao anatin'ny volana mangatsiaka, satria tsy dia be volo. Tena niofana tsara izy, vaky trano tao anatin'ny herinandro ary mahalala baiko. Mamihina mihitsy aza izy! Tsy manandratra ny tongony hihaona izy, mety misy ifandraisany manamboatra azy aloha be (?) , fa manenjana ve ity zavatra manenjana ity? Salama be izy ary tsy nanana olana taminy aho. Tsy mba mitsako n'inona n'inona koa izy na oviana na oviana! ALOHA TSARA INDRINDRA !!!
Fergus ny brindle sy ny fotsy Boston / Beagle mifangaro toy ny alika kely matory amin'ny tany.
Bosey ny brindle sy ny fotsy tertera mifangaro ao Boston Terrier / Beagle (Boglen Terrier) eo amin'ny 5 volana eo ho eo
Bosey the Boston Terrier / Beagle mix puppy (Boglen Terrier) amin'ny 10 herinandro sy mihoatra ny 4 pounds - hoy ny tompony, 'Manana hery be dia be izy ary tia milalao' alika alika kely '. Rehefa navotsotra daholo izy rehetra dia tia miforitra eo am-pelatanantsika mandritra ny torimaso. '
Bosey the Boston Terrier / Beagle mix puppy (Boglen Terrier) amin'ny 10 herinandro sy mihoatra ny 4 pounds
'Ity i Brady, ilay tompon-tany mainty atao hoe Boglen Terrier. Hitanay tamin'ny alàlan'ny maso ivoho mpanangana iray ary ny tantarany dia navotana tamina trano tsy nisy mpiahy tany Tennessee izy tamin'izy iray volana teo ho eo. Efa ho enim-bolana izao izy ary heverin'ny mpitsabo biby fa efa lehibe avokoa. Milanja ~ 18 lbs izy izao. ary ~ 17 '' lava. Brady dia zazakely lehibe. Tiany ny misolelaka ary alika mandry indraindray nefa koa tena mihetsika . '
'Heverinay ho tsy matahotra izy satria tonga hatrany amin'ny karazany lehibe kokoa eto amintsika zaridaina alika eo an-toerana ary tafiditra amin'ny hetsika. Tena tia milalao izy ary tsy tapaka manana kilalao baolina na mitsako eo am-bavany. Nasiaka tampoka izy tamin'ny voalohany saingy niaraka tamin'ny fiofanana kely na kely aza dia nivadika ho alika tsara toetra izy. Tiany ny alika hafa ary miaraka amin'ny olon-kafa koa izy. Fanofanana poti tsio-drivotra ary Brady tsy mba sendra lozam-pifamoivoizana tao anatiny. Isaky ny mila 'mandeha' izy dia mipetraka fotsiny eo am-baravarana aoriana hiandry antsika hamoaka azy. '
'Izahay dia mihevitra ny fahazarany tsara indrindra amin'ny fomba saininy tsara. Naharitra ihany ny faharetana fa Brady mihaino tsara ary tonga isaky ny miantso tsy am-pihambahambana. Alika mahatoky tokoa izy. Tena faly izahay miaraka amin'i Brady afa-tsy ny fahazarany mitsambikina amin'ny mpitsidika . Nihatsara izy ary mahatsapa fiofanana kely kokoa izahay fa hosakananay hiala amin'ity fahazaran-dratsy ity. '
'Manana fandatsahana antonony izy. Hitanay fa ny fikosehana haingana sy isan'andro dia manampy amin'ny famongorana ny sasany amin'ity olana ity. Mahazo fandroana shampooina maina 2-3 isan-kerinandro koa izy hiadiana amin'ny olana. Izy io koa dia manampy amin'ny azy hoditra maina malefaka . Ny fampiasany dia misy mandeha isan'andro manodidina ny cul-de-sac mandritra ny 10-15 minitra eo ho eo. Miezaka ny hitondra azy any amin'ny zaridainan'ny alika eo an-toerana izahay manodidina ny 2-3 isan-kerinandro mba hamelana azy hamoaka ny heriny. Amin'ny ankapobeny dia tsy nahazatra anay ny fifangaroana karazana ary tsy fantatray fa nomena anaram-boninahitra Boglen Terrier aza izy io. Nanjary alika mahafinaritra izy. '
Winston the Boglen Terrier (alika mifangaro Beagle / Boston Terrier mifangaro) amin'ny 6 taona
Winston ilay brindle sy fotsy Boglen Terrier (alika bree mix any Beagle / Boston Terrier) amin'ny 6 taona
Winston the brindle and white Boglen Terrier (Beagle / Boston Terrier mix bree dog) amin'ny faha-6 taonany eo amin'ny ondrin'ny zaridaina alika
Chihuahua sy ny mpiandry ondry Aostraliana Mix
Hijery ohatra misimisy momba ny Boglen Terrier
Sary Boglen Terrier 1
firy ny alika kely ananan'ny mastiff
inona no Labrador volafotsy iray mitovy
alika eskimo amerikana chihuahua mix
alemaina fohy mpanondro loko atiny